Ra’iisal Wasaare Khayre oo weeraray Xukuumadhii ka horeeyey. – Samawadenews
Ra’iisal Wasaare Khayre oo weeraray Xukuumadhii ka horeeyey.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre oo ka qeyb galayey kulan ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta Soomaalida, gaar ahaan madaxdii isaga kaga horreysa talada dalka.
Khayre ayaa sheegay in markii isaga iyo Madaxweyne Farmaajo ay la wareegeen xafiiska ay u yimaadeen hab dhaqan siyaasadeed oo aad u xun, islamarkaana ka duwan hab dhaqanka siyasaadeed ee ka jira caalamka, tilmaamayna in xilligaasi la aaminsanaa in siyaasadda lagu raado dan gaar, laguna lunsado dhaqaale, sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in dhammaan ay bedaleen hab dhaqankaasi, islamarkaana laga gudbay dhibaatooyinkii jiray, haatana dowladda Soomaaliya ay la jaan qaadeyso siyaasad ahaan dowladaha kale ee ka jira dalalka caalamka.
Qaramada Midoobey oo war ka soo saartay Dilkii Madaxweyne Mohamed Mursi ee Dalka Masar.
Wasiirkii hore ee Wasaarada Difaaca Somaliland Caddami: “Qabyaaladii iyo Dimoqraadiyadii”
Beesha Musafiin oo ka Digtay in la weeciyo Qorshihii hore ee Biyo Balaadhinta Boorama.
Madaxweynaha Siciid Deni oo Aqbalay inuu Muqdisho yimaado.
Wasiirka Maaliyadda DFS Dr. C/raxmaan Beyle oo ka Hadlay Deyn Cafinta Somalia
[An-Nur (the Light): 13]